11 Sep 2017 . 5:24 PM
ဘော်ဒါတွေနဲ့ ဆုံလိုက်ပြီဆိုရင် ယမကာဆိုင်ကိုပဲ ခြေဦးလှည့်ကြတာပဲလေ။ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး သောက်လိုက်ကြတာ လူမှန်းသူမှန်းမသိဖြစ်တော့မှ အိမ်ပြန်လာတာ။ မနက်ကျတော့ ခေါင်းတွေကိုက်ပြီး မအီမသာဖြစ်ကုန်ရော။ အလုပ်ကလည်း မသွားမဖြစ်ဖူးဆိုတော့ အမူးမပြေသေးလည်း ရုံးတက်ရတာဆိုတော့ တစ်နေကုန်အဆင်မပြေတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ညတုန်းက ကဲချင်သလောက်ကဲ မနက်ခင်းမှာ အရက်နာမကျစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဆရာစားမချန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ အရက်နဲ့ရေ ဆတူသောက်ပါ။
အရက်နာကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်လုိ့ပါ။ အဲဒီတော့ အရက်တစ်ခွက်သောက်ပြီးရင် နောက်တစ်ခွက်ဆက်တိုက် မသောက်ပါနဲ့ဦး။ ကြားမှာ ရေတစ်ခွက်သောက်လိုက်ပါ။ အဲဒီလိုတစ်လှည့်စီ သောက်သွားလိုက်။ ဗိုက်ထဲမှာ အရက် (၅) ခွက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရေ (၅)ခွက် ဝင်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပါ။
၂။ အဆီဓာတ်များတဲ့ ဖျော်ရည်သောက်ပါ။
ထောပတ်သီးဖျော်ရည်လို ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်တော်ပြီး အဆီဓာတ်များတဲ့ ဖျော်ရည်မျိုးကို အရက်မသောက်ခင်မှာ ကြိုသောက်ထားသင့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ထောပတ်သီးဖျော်ရည်က ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အယ်ကိုဟောဓာတ်ကို စုတ်ယူနိုင်တဲ့အတွက် အရက်အများကြီးမူးတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါမှသာ မနက်ခင်းမှာ ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ဆားဓာတ်ပါတဲ့ ဖျော်ရည်တွေကို မသောက်ပါနဲ့။
ဆားငန်သီးဖျော်ရည်တွေလို အငန်ဓာတ်ပါတဲ့ဖျော်ရည်တွေကို မသောက်ပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က အရက်တွေကို ပိုမိုစုတ်ယူပြီး အမူးလွန်စေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အငန်ဓာတ်ပါတဲ့ ဖျော်ရည်တွေကို သောက်လိုက်ရင် ပုံမှန်မူးတာထက်ပိုပြီး မူးစေတတ်ပါတယ်။
ယမကာဆိုင်မှာ မူးကွဲအောင် သောက်ထားပြီဆိုရင် အိမ်ကိုပဲ တန်းပြန်လိုက်ပါတော့။ ပြီးရင် အနည်းဆုံး (၈) နာရီလောက် အိပ်စက်လိုက်ပါ။ ဒါမှသာ မနက်ပိုင်းမှာ လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ နိုးထနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညလုံးသောက်ထားတဲ့ အရက်တွေမှ အဆိပ်အတောက်တွေကို စစ်ထုတ်ရာမှာ နွမ်းနယ်လာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို အနားရစေဖို့ အိပ်စက်လိုက်ပါ။
ကဲ . . . ဒီအချက်တွေက အရက်နာမကျအောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရက်ကို ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်သောက်သုံးနိုင်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
ဘျောဒါတှနေဲ့ ဆုံလိုကျပွီဆိုရငျ ယမကာဆိုငျကိုပဲ ခွဦေးလှညျ့ကွတာပဲလေ။ တဈလုံးပွီးတဈလုံး သောကျလိုကျကွတာ လူမှနျးသူမှနျးမသိဖွဈတော့မှ အိမျပွနျလာတာ။ မနကျကတြော့ ခေါငျးတှကေိုကျပွီး မအီမသာဖွဈကုနျရော။ အလုပျကလညျး မသှားမဖွဈဖူးဆိုတော့ အမူးမပွသေေးလညျး ရုံးတကျရတာဆိုတော့ တဈနကေုနျအဆငျမပွတေော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ညတုနျးက ကဲခငျြသလောကျကဲ မနကျခငျးမှာ အရကျနာမကစြဖေို့ နညျးလမျးကောငျးတှကေို ဆရာစားမခနျြဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ အရကျနဲ့ရေ ဆတူသောကျပါ။
အရကျနာကတြဲ့အကွောငျးရငျးတဈခုက ရဓောတျခမျးခွောကျလုိ့ပါ။ အဲဒီတော့ အရကျတဈခှကျသောကျပွီးရငျ နောကျတဈခှကျဆကျတိုကျ မသောကျပါနဲ့ဦး။ ကွားမှာ ရတေဈခှကျသောကျလိုကျပါ။ အဲဒီလိုတဈလှညျ့စီ သောကျသှားလိုကျ။ ဗိုကျထဲမှာ အရကျ (၅) ခှကျဝငျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ရေ (၅)ခှကျ ဝငျပွီးသားဖွဈနမှောပါ။
၂။ အဆီဓာတျမြားတဲ့ ဖြျောရညျသောကျပါ။
ထောပတျသီးဖြျောရညျလို ကနျြးမာရေးနဲ့ သငျ့တျောပွီး အဆီဓာတျမြားတဲ့ ဖြျောရညျမြိုးကို အရကျမသောကျခငျမှာ ကွိုသောကျထားသငျ့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ထောပတျသီးဖြျောရညျက ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အယျကိုဟောဓာတျကို စုတျယူနိုငျတဲ့အတှကျ အရကျအမြားကွီးမူးတော့မှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ ဒါမှသာ မနကျခငျးမှာ ကွညျကွညျလငျလငျနဲ့ အလုပျလုပျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၃။ ဆားဓာတျပါတဲ့ ဖြျောရညျတှကေို မသောကျပါနဲ့။
ဆားငနျသီးဖြျောရညျတှလေို အငနျဓာတျပါတဲ့ဖြျောရညျတှကေို မသောကျပါနဲ့။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဆိုဒီယမျဓာတျကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျက အရကျတှကေို ပိုမိုစုတျယူပွီး အမူးလှနျစတေဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ အငနျဓာတျပါတဲ့ ဖြျောရညျတှကေို သောကျလိုကျရငျ ပုံမှနျမူးတာထကျပိုပွီး မူးစတေတျပါတယျ။
ယမကာဆိုငျမှာ မူးကှဲအောငျ သောကျထားပွီဆိုရငျ အိမျကိုပဲ တနျးပွနျလိုကျပါတော့။ ပွီးရငျ အနညျးဆုံး (၈) နာရီလောကျ အိပျစကျလိုကျပါ။ ဒါမှသာ မနကျပိုငျးမှာ လနျးဆနျးတကျကွှစှာ နိုးထနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တဈညလုံးသောကျထားတဲ့ အရကျတှမှေ အဆိပျအတောကျတှကေို စဈထုတျရာမှာ နှမျးနယျလာတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှကေို အနားရစဖေို့ အိပျစကျလိုကျပါ။
ကဲ . . . ဒီအခကျြတှကေ အရကျနာမကအြောငျ ကူညီပေးနိုငျမယျ့ အခကျြတှပေဲဖွဈပါတယျ။ အရကျကို ခငျြ့ခငျြ့ခြိနျခြိနျသောကျသုံးနိုငျပွီး အန်တရာယျကငျးဝေးကွပါစလေို့ ဆုတောငျးလိုကျရပါတယျ။